Dhammaan suuqyada crypto ee adduunka oo dhan leh sicirka sarrifka iyo macaamil ganacsi.
TOPTOP AA BB CC DD EE FF GG HH II KK LL MM NN OO PP QQ RR SS TT UU VV WW XX YY ZZ 55
Tirinta of lacagta digital
Tirinta lamaanaha ganacsiga
BKEX suuq duufaan 3 267 035 321 $ 38 3 74
TAGZ suuq duufaan 3 222 190 930 $ 7 3 14
BitForex suuq duufaan 2 395 147 378 $ 42 3 67
LBank suuq duufaan 2 301 042 612 $ 22 3 35
Coinsbit suuq duufaan 2 264 473 527 $ 12 9 38
BiKi suuq duufaan 2 187 282 219 $ 37 4 50
Fatbtc suuq duufaan 2 172 272 130 $ 26 6 44
TAGZ Exchange suuq duufaan 2 060 290 914 $ 2 3 3
Bilaxy suuq duufaan 1 999 969 006 $ 52 3 60
Coineal suuq duufaan 1 966 833 597 $ 9 3 15
BitMEX suuq duufaan 1 915 161 644 $ 1 1 1
Hotbit suuq duufaan 1 851 795 221 $ 58 5 120
P2PB2B suuq duufaan 1 810 315 503 $ 34 4 99
MXC suuq duufaan 1 775 189 595 $ 58 4 87
DigiFinex suuq duufaan 1 720 489 909 $ 50 4 98
CoinBene suuq duufaan 1 697 057 151 $ 49 4 59
Dcoin suuq duufaan 1 692 651 092 $ 23 3 29
OKEx suuq duufaan 1 634 426 415 $ 79 6 207
Binance suuq duufaan 1 555 416 514 $ 67 13 207
BitZ suuq duufaan 1 553 360 741 $ 38 4 58
ABCC suuq duufaan
ACX suuq duufaan
Abucoins suuq duufaan
AidosMarket suuq duufaan
Allbit suuq duufaan
Allcoin suuq duufaan
Altcoin Trader suuq duufaan
Alterdice suuq duufaan
Altilly suuq duufaan
Artis Turba suuq duufaan
B2BX suuq duufaan
BBX suuq duufaan
BCEX suuq duufaan
BHEX suuq duufaan
BITBOX suuq duufaan
BITKER suuq duufaan
BITStorage suuq duufaan
BKEX suuq duufaan
BTC Markets suuq duufaan
BTC Trade UA suuq duufaan
BTC-Alpha suuq duufaan
BTC-exchange suuq duufaan
BTCBOX suuq duufaan
BW suuq duufaan
BW.com suuq duufaan
Bancor Network suuq duufaan
Beaxy suuq duufaan
Bgogo suuq duufaan
BiKi suuq duufaan
Bibox suuq duufaan
BigONE suuq duufaan
Bilaxy suuq duufaan
Binance suuq duufaan
Binance DEX suuq duufaan
Binance Jersey suuq duufaan
Binance US suuq duufaan
Birake Network suuq duufaan
Bisq suuq duufaan
BitAsset suuq duufaan
BitBay suuq duufaan
BitFlip suuq duufaan
BitForex suuq duufaan
BitMEX suuq duufaan
BitMax suuq duufaan
BitRabbit suuq duufaan
BitShares Asset Exchange suuq duufaan
BitUBU suuq duufaan
BitZ suuq duufaan
Bitbank suuq duufaan
Bitbns suuq duufaan
Bitci suuq duufaan
BitcoinTrade suuq duufaan
BiteBTC suuq duufaan
Bitex.la suuq duufaan
Bitfinex suuq duufaan
Bithesap suuq duufaan
Bithumb suuq duufaan
Bithumb Global suuq duufaan
Bithumb Singapore suuq duufaan
Bitkub suuq duufaan
Bitlish suuq duufaan
Bitnaru suuq duufaan
Bitonic suuq duufaan
Bitpanda Global Exchange suuq duufaan
Bitrue suuq duufaan
Bits Blockchain suuq duufaan
Bitsane suuq duufaan
Bitsdaq suuq duufaan
Bitso suuq duufaan
Bitsonic suuq duufaan
Bitstamp suuq duufaan
Bitstamp (Ripple Gateway) suuq duufaan
Bittrex suuq duufaan
Bittylicious suuq duufaan
Bitvavo suuq duufaan
Bleutrade suuq duufaan
Braziliex suuq duufaan
BtcTrade.im suuq duufaan
BtcTurk | Pro suuq duufaan
Buda suuq duufaan
Bytex suuq duufaan
bitFlyer suuq duufaan
C-Patex suuq duufaan
C2CX suuq duufaan
CBX suuq duufaan
CCXCanada suuq duufaan
CEX suuq duufaan
CEX.IO suuq duufaan
CHAOEX suuq duufaan
CODEX Exchange suuq duufaan
COSS suuq duufaan
CPDAX suuq duufaan
CROSS exchange suuq duufaan
CRXzone suuq duufaan
Cashierest suuq duufaan
Cat.Ex suuq duufaan
ChainX suuq duufaan
Chaince suuq duufaan
CoinBene suuq duufaan
CoinCorner suuq duufaan
CoinEgg suuq duufaan
CoinEx suuq duufaan
CoinEx Market suuq duufaan
CoinFalcon suuq duufaan
CoinField suuq duufaan
CoinHe suuq duufaan
CoinJar suuq duufaan
CoinMate suuq duufaan
CoinMetro suuq duufaan
CoinMex suuq duufaan
CoinPlace suuq duufaan
CoinTiger suuq duufaan
CoinZest suuq duufaan
Coinall suuq duufaan
Coinbase Pro suuq duufaan
Coinbit suuq duufaan
Coincheck suuq duufaan
Coindeal suuq duufaan
Coineal suuq duufaan
Coinfloor suuq duufaan
Coingi suuq duufaan
Coinhouse suuq duufaan
Coinlim suuq duufaan
Coinone suuq duufaan
Coinrail suuq duufaan
CoinsBank suuq duufaan
Coinsbit suuq duufaan
Coinsuper suuq duufaan
Coinut suuq duufaan
Coinzo suuq duufaan
CredoEx suuq duufaan
Crex24 suuq duufaan
CryptalDash suuq duufaan
CryptoMarket suuq duufaan
Cryptohub suuq duufaan
Cryptology suuq duufaan
Cryptomate suuq duufaan
Cryptonex suuq duufaan
cfinex suuq duufaan
DDEX suuq duufaan
DOBI Exchange suuq duufaan
DOBI trade suuq duufaan
DSX suuq duufaan
Dcoin suuq duufaan
Dex-Trade suuq duufaan
DigiFinex suuq duufaan
DragonEX suuq duufaan
EXX suuq duufaan
EtherDelta suuq duufaan
EtherDelta (ForkDelta) suuq duufaan
EtherFlyer suuq duufaan
ExMarkets suuq duufaan
Exmo suuq duufaan
ExtStock suuq duufaan
FCoin suuq duufaan
FEX suuq duufaan
Fatbtc suuq duufaan
Fisco suuq duufaan
FreiExchange suuq duufaan
GBX Digital Asset Exchange suuq duufaan
GDAC suuq duufaan
GOPAX suuq duufaan
Gate.io suuq duufaan
Gatehub suuq duufaan
Gemini suuq duufaan
Globitex suuq duufaan
Graviex suuq duufaan
HCoin suuq duufaan
Hanbitco suuq duufaan
Heat Wallet suuq duufaan
HitBTC suuq duufaan
Hoo suuq duufaan
Hotbit suuq duufaan
Hubi suuq duufaan
Huobi suuq duufaan
Huobi (HBUS) suuq duufaan
Huobi Global suuq duufaan
Huobi Indonesia suuq duufaan
Huobi Korea suuq duufaan
Huobi Russia suuq duufaan
IDAX suuq duufaan
IDCM suuq duufaan
IDEX suuq duufaan
Independent Reserve suuq duufaan
Indodax suuq duufaan
Instant Bitex suuq duufaan
itBit suuq duufaan
Koineks suuq duufaan
Koinim suuq duufaan
Korbit suuq duufaan
Kraken suuq duufaan
Kryptono suuq duufaan
KuCoin suuq duufaan
Kuna suuq duufaan
Kyber Network suuq duufaan
LATOKEN suuq duufaan
LBank suuq duufaan
LakeBTC suuq duufaan
Liquid suuq duufaan
LiteBit.eu suuq duufaan
Livecoin suuq duufaan
LocalTrade suuq duufaan
Luno suuq duufaan
Lykke Exchange suuq duufaan
MBAex suuq duufaan
MXC suuq duufaan
Mercado Bitcoin suuq duufaan
Mercatox suuq duufaan
NAGAX suuq duufaan
Nocks suuq duufaan
OKCoin suuq duufaan
OKEx suuq duufaan
OKEx Korea suuq duufaan
OTCBTC suuq duufaan
OVEX suuq duufaan
OceanEx suuq duufaan
Octaex suuq duufaan
Omgfin suuq duufaan
OpenLedger DEX suuq duufaan
Ovis suuq duufaan
P2PB2B suuq duufaan
Paribu suuq duufaan
Paritex suuq duufaan
PayBito suuq duufaan
Paymium suuq duufaan
PoloniDEX suuq duufaan
Poloniex suuq duufaan
Polyx suuq duufaan
ProBit Exchange suuq duufaan
QBTC suuq duufaan
Qryptos suuq duufaan
Quoine suuq duufaan
Rfinex suuq duufaan
RightBTC suuq duufaan
Ripple China suuq duufaan
RippleFox suuq duufaan
RuDEX suuq duufaan
STEX suuq duufaan
Satang Pro suuq duufaan
Shortex suuq duufaan
Simex suuq duufaan
Sistemkoin suuq duufaan
SouthXchange suuq duufaan
Stellarport suuq duufaan
Stellarterm suuq duufaan
Switcheo Network suuq duufaan
TAGZ suuq duufaan
TAGZ Exchange suuq duufaan
TDAX suuq duufaan
TOKOK suuq duufaan
TOPBTC suuq duufaan
TRX Market suuq duufaan
The Rock Trading suuq duufaan
Tidebit suuq duufaan
Tidex suuq duufaan
Tokenomy suuq duufaan
Tokens.net suuq duufaan
Trade By Trade suuq duufaan
Trade Satoshi suuq duufaan
TradeOgre suuq duufaan
Triv Pro suuq duufaan
Txbit suuq duufaan
token.store suuq duufaan
Upbit suuq duufaan
VCC Exchange suuq duufaan
VELIC suuq duufaan
VINEX Network suuq duufaan
Vebitcoin suuq duufaan
VinDAX suuq duufaan
ViteX suuq duufaan
WEX suuq duufaan
Waves Decentralized Exchange suuq duufaan
Waves Exchange suuq duufaan
WazirX suuq duufaan
WhiteBit suuq duufaan
xBTCe suuq duufaan
YoBit suuq duufaan
YunEx suuq duufaan
ZB.COM suuq duufaan
ZBG suuq duufaan
Zaif suuq duufaan
Zebpay suuq duufaan
55 Global Markets suuq duufaan
55.com suuq duufaan
Suuqyada loo yaqaan 'lacagta digital suuqyada' waa isweydaarsiga ganacsiga lacagaha dijitaalka ah ama lacagaha loo yaqaan 'aaladaha lacagta'. Suuqyada loo yaqaan 'Crypto suuqyada' sida caadiga ah waxay ku takhasustay lacagta digital, in kasta oo ay sidoo kale ku ganacsan karaan lacagaha waaweyn.
Isweydaarsiga lacagaha 'cryptoptorency' waxaa loo kala iibsaday labo-labo: crypto illaa crypto ama crypto illaa lacag la wadaago. Si loo go'aamiyo iibsashada / iibka labada lammaane ee ganacsiga, qiimaha macaamilku waxaa lagu turjumay dollar.
Isweydaarsiga Crypto waxay leeyihiin astaamaha ugu waaweyn:
Qaddarka lacagaha loo adeegsado
Lacagta lammaaneyaasha ganacsiga
Muuqaalka sarrifka lacagaha 'Isweydaarsiga' sarrifka lacagaha - wadarta tirada doolar ee dhammaan macaamillada lammaaneyaasha ganacsiga waqti cayiman. Sida caadiga ah, mugga ganacsiga ee isweydaarsiga crypto waxaa lagu qiyaasaa maalin kasta.
Xaddiga lacagaha loo adeegsado ee suuqyada sarrifka lacagaha loo yaqaan 'aaladaha lacagta suuqyada) waa wadarta tirada tirooyinka kala duwan ee loo adeegsaday isweydaarsigaan waqtiyadii ugu dambeeyay. Tirada isweydaarsiga lacagaha 'aaladaha lacagta' ee sarrifka 'lacagta digital' waxaa lagu gartaa guud ahaan caalami ahaanta ganacsiga ee si gaar ah loogula macaamilayo lacagta digital, tirada dadka wax iibsan kara iyo iibiyaasha sarrifka lacagaha 'crypto'.
Tirada lacagaha - noocyada guud ee lacagaha caadiga ah ee mid kasta oo ka mid ah suuqyada sarrifka lacagta digital lagu iibiyo ama la iibsado. Sida caadiga ah, aaladaha lacagta waxaa lagu ganacsadaa doollar.
Xaddiga lammaaneyaasha ganacsiga ee isweydaarsiga crypto-ka waa tirada macaamilada la dhammaystiray ee suuqan loo yaqaan 'crypto-market' maalin kasta. Tirada ballaaran ee lammaaneyaasha ganacsiga, ayaa si firfircoon uga ganacsata ayaa dhaca, marka kuwa wax iibsada ay sii badnaadaan, iibiyaasha crypto isweydaarsigan.
Shabakada internetka ee loo yaqaan 'cryptoratesxe.com', waxaan raadraacnaa dhammaan isweydaarsiga crypto ee firfircoon adduunka oo aan ku soo bandhigno qiimeyntooda astaamahaas.
Waxaan sidoo kale bixinnaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan suuq kasta oo loo yaqaan 'crypto' oo bilaash iyo toos ah.
Ganacsiga Lacagta digital waxaa loo soo bandhigayaa lacagta digital kasta:
mugga ganacsiga 'Lacagta digital'.
Qiimaha iibsiga ugu wanaagsan ee lacagta digital ee sarrifka 'lacagta digital'.
Qiimaha iibka ugu wanaagsan ee lacagta digital ee sarrifka 'lacagta digital'.
Qiimeynta Lacagta 'Lacagta digital'
Qiimaynta sarrifka 'crypto-exchange' waxaa lagu soo bandhigay websaydhka bilaashka ah khadka tooska ah.
Qiimaynta isweydaarsiga crypto waxaa loo tixgelin karaa iyadoo loo eegayo astaamo kaladuwan:
Tirada lammaanaha ganacsiga
Waxaan ku tusin jadwalka qiimeynta sarrifka 'crypto-exchange' oo lagu kala soocayo mugga ganacsiga.
Waxaan aaminsanahay in mugga ganacsiga ka weyn, qiimeynta sare ee suuqa crypto.
In kasta oo qiimeynta sarrifka 'crypto' lagu xisaabin karo labadaba tirada lammaaneyaasha ganacsiga iyo tirada macaamiisha loo yaqaan 'aaladaha lacagta'.
Isweydaarsiga Cryptoexex 2020
Isweydaarsiga Lacagta digital ee 2020 - jadwalka tooska ah ee websaydhka cryptoratesxe.com ee is-weydaarsiga ee sameeya isdhaafsiga ganacsi firfircoon ee 2020.
Isweydaarsiga Crypto 2020 - adeeg leh macluumaad casri ah oo ka imanaya dhammaan isweydaarsiga hadda ka jira adduunka.
Waxaan si joogto ah u cusbooneysiinaa macluumaadka ku saabsan isweydaarsiga lacagta digital ee 2020, waxaan heysanaa liis iyo qiimeyn isweydaarsiga lacagta digital ee 2019, waxaanan rajeyneynaa inaan yeelan doonno qiimeynta isweydaarsiga lacagta digital ee 2021.
Kala soco is-weydaarsiga crypto firfircoon ee 2020 websaydhkeena.
Isweydaarsiga ugu fiican ee lacagta digital, suuqyada lacagta digital ugu sarreeya.
Isweydaarsiga ugu fiican ee adduunka adduunka, suuqyada crypto ee sareeya - adeeggayaga khadka tooska ah iyo bilaash.
Shaxda isweydaarsiga ugu fiican ee crypto ayaa lagu soo bandhigay boggan, oo lagu kala soocay mugga ganacsiga.
TOP 20 suuqyada lacagta digital ugu fiican marka loo eego mugga ganacsiga waxaa nalaga tixgaliyaa khadka tooska ah, maalin kasta iyo saacad kasta.
Isweydaarsiga ugu fiican crypto maanta , 5ta suuq ee ugu sareeya:
TAGZ-Exchange suuq duufaan
Sare ee isweydaarsiga ugu fiican ee lacagta digital ayaa sidoo kale lagu dari karaa tirada aaladaha lacagta iyo tirada lammaaneyaasha ganacsiga isweydaarsiga kasta.